LEUKEMIA EE LO'DA: SIDA LOO AQOONSADO IYO LOO DAAWEEYO CUDURKA WAKHTIGA - MAQAALLO
Maanta, tuulo kasta oo ka tirsan guriga waxaa ku jira lo'da, iyo mararka qaarkood - ma aha mid.
Dadku waxay xayawaankan xayawaan u yihiin waxtarkooda sare, taas oo ah, waxa ka mid ah waxyaabaha lo'da ka bixiya caanaha iyo hilibka.
Laakiin inta badan waxaad la kulmi kartaa xaalad noocaas ah marka xayawaanku bilaabay inuu "u engego."
Inta badan, waxay calaamad u tahay cudur, sida leukemia.
Cudurkaasi wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah, haddaba, haddii aad rabto inaad cudurka ku qaadato waqti, daawo xayawaankaaga ama ilaaliso dhammaan lo'daha, markaa xogtan ayaa aad kuu caawin doonta.
Leukemia waa cudurrada daba-joogta ah.kuwaas oo saameeya xubnaha dhiigga ku jira.
Marka uu cudurku sii socdo, unugyada jidhka ee fuliya ficilaha hematopoietic ayaa kora oo yeesha liidata, taas oo ka dhalatey taas oo ah dheecaan badan oo lymphocytes lagu sii daayo dhiigga. Mararka qaarkood leukemia waxay ku dhamaanaysaa sameynta burooyinka jirka ee lo'da, iyo sidoo kale dhaawaca guud ee unugyada jirka oo dhan.
Ma ahan oo kaliya lo'du waa ay la jirtaa leukemia, laakiin sidoo kale doofaarro, fardo iyo xitaa aadanaha. Cudurka ayaa markii hore la cayimay dhamaadkii qarnigii 19aad. Tan iyo markaas, adduunku wuu ogyahay ereyada sida leukemia, leukemia, kansarka dhiigga. Cudurradan oo dhan waxaa loola jeedaa hal infekshan - leukemia.
Wakiilka keena ee leukemia waa fayraska RNA, kaas oo ka tirsan kooxda C (oncoviruses). Fayruska cirridka ee lafdhabarta ah wuxuu la mid yahay qaababka morphological ee cudurada isku midka ah ee xubno kale oo ka mid ah dunida xayawaanka, laakiin farqiga waxaa lagu arkay heerka qaabka antigenic.
Inkasta oo cawaaqibta laga yaabo in fayrusku uu sababi karo, caabbinta sababaha bay'adda deegaanka ka hooseeya celceliska.
Xaaladaha unugyada horeba heerkul ah 60 ° C, bukaan-socodkani onbovirus ma noolaan doono wax ka badan hal daqiiqo, iyo xaaladaha heerkul ah 100 ° C dhimashada waxay dhacdaa isla markiiba.
Nadiifinta waxaa la samayn karaa iyadoo la adeegsanayo xal soodhada caustic ah iyada oo la fiirinayo 2-3%. Waxa kale oo aad xoqin kartaa fayruska 3% xalal rasmi ah ama xal chlorine ah 2%.
Caanaha, "cayayaan" ayaa u dhiman doona inta lagu jiro karkarinta ama geeddi-socodka dareenka.
Leukemia waxay ku kori kartaa jidhka xayawaan muddo aad u dheer iyada oo aan saameyn gaar ah ku yeelan xaaladda guud ee lo'da. Tani waa sababta oo ah pathogen ee unugyada waxay noqon kartaa mid aad u dheer oo ku xiran genom.
Dhaawac ayaa dhacaya xilligan xaddiga dheef-shiid kiimikaadka hooseeya ama xayawaanka aan xadka lahayn ee xayawaanku sii xumaanayo.
Ku tiirsanaanta da'da qaansarrada iyo boqolkiiba madaxyada cudurka qaba lama baadhi karo, ka dibna celcelis ahaan Xayawaannada 4-8 jirka ah ayaa badanaa xanuunsada.
Seynisyahanadu sidoo kale waxay xusuusnaadaan in sababo badani, xayawaanka ay u nugul yihiin infekshan ku dhaca midabka cas ama midab madow iyo madow. Fayraskan wuxuu ku gudbin karaa maaha kaliya wakiilada lo'da, laakiin sidoo kale riyo, ido.
Xayawaannada caafimaadka leh waxay ku dhici karaan oo kaliya ka yimid wakiil balaaran oo lo 'ah. Marka lo'da uu ku jiro marxaladda koowaad ee cudurka, markaa bukaan-socodka oncovirus waxaa laga heli karaa caanaha iyo dambarka.
Saliva waxaa sidoo kale ku jiri kara boqolkiiba boqol oo unugyada cudurka qaba.
Haddii aan tixgelinno habka faafinta fayruska, ka dibna daaqada waxaa ku jira 2 nooc oo farsamo ah - kani waa isku gudbinta tooska ah ee caanaha, mandheerta iyo dambarka iyo gudbinta wareegga.
Taasi waa, weylaha ayaa laga yaabaa inay ku dhashaan (tani waa caabuq dhalmada ka hor), iyo lo'daha qaangaarka ah waxay ku qaadi karaan qaadsiin marka ay la wadaagaan (tani waa infekshanka umusha).
Kiiskani wuxuu u baahan yahay cilmi-baaris, sababtoo ah weli lama ogeyn in xayawaannada caafimaadka leh ay ku dhici karaan leukemia-ga oo loo maro caanaha nadiifka ah (feeders, cabitaanada) ama cayayaanka dhiigga nuugaya ee qaniinay lo'da jirran.
Xayawaanku waxay u nugul yahiin infakshanka 'leukemia', oo leh jinsi iyo jinsi nafsiyadeed oo la go'doomay.
Waxyaalaha bay'ada deegaanka ah ma saameyn karaan infekshinka, gaar ahaan, isbeddelka xilliyada, xaaladaha cimilada ama qaababka juqraafiga ma saameynayaan habka faafinta fayraska. Qodobka ugu muhiimsan ee saameynaya fiditaanka fayrasku waa cagaarshowga da'da yar ee beeraha kuwaas oo aan si taxadar leh u raacin habka loo baaro lo'da ee leukemia.
Leukemia badanaa waa qarsoodi, taas oo ah, pathogen-ka ayaa dhaqdhaqaaqa ku leh saameynta arrimo gaar ah oo keenaya in ay tahay wax aan caadi ahayn oo ku jira xubnaha dhiigga ku jira.
Dibedda, xayawaanka buka ayaa ka duwan mid caafimaad qaba. Waa suurtogal in la aqoonsado cudurka iyada oo la adeegsanayo baaritaanka dhiigga, taas oo muujin doonta xad-gudubyada kala duwanaanshaha unugyada iyo qaybtooda.
Leukemia wuxuu u dhaqmaa sidan oo kale in unugyada leukoblastic ay bilaabaan in ay si kala duwan u kala qaybiyaan xubnaha dhiigga, beeryarada, limfa noodiska iyo dhuuxa lafta. Unugyada aan xakameyneynin ayaa ku faafa dhammaan jirka xayawaanka iyo socodka dhiigga oo gaara dhammaan xubnaha iyo unugyada.
Sidan oo kale, burooyinka ayaa la sameeyaa kuwaas oo bedelaya qaab-dhismeedka iyo carqaladeeya shaqada jirka ee hoos u dhacay infekshanka, iyada oo u dhaqmaysa unugyo gaar ah (oo ah atrophy).
Dhammaan nidaamyada unugyada jirka, unugyada iyo habdhaqanka ayaa daciif ah, taas oo sabab u ah jahwareerka habka hematopoietic iyo kororka tirada lymphocytes.
Ilaa inta aan isbeddel lagu sameynin dhiigga dillaacay, marxaladda horumarinta cudurka waxaa loo tixgelin doonaa in la isugeynayo. Marka la qaadsiiyo tijaabin, muddada udhaxeysa 60 ilaa 750 maalmood, iyo caabuq aan xakameynin - laga bilaabo 2 ilaa 6 sano.
Nidaamka dhan ee leukemia ayaa loo qaybiyaa marxaladaha: preleukemic, bilowga, horumarsan iyo terminal. Marka uu cudurku sii socdo, marxaladaha isbedelka ayaa is bedelaya.
Calaamadaha lagu garto marxaladda horay loo yaqaan 'leukemia waxaa kaliya oo la sameeyaa ka dib marka la sameeyo baaritaanada fayraska.
Marka leukemia galo marxaladda ugu horreysa, isbeddellada (tayada iyo tayada) qaybta unugyada dhiigga ayaa la ogaanayaa. Kordhinta tirada leukocytes, kororka boqolkiiba ee lymphocytes ayaa la xusay. Sidoo kale dhiigga wuxuu u muuqdaa unugyo aan qaan gaarin, unugyo aan kala sooc lahayn kuwaas oo aan caadi ahayn qaabka iyo dhammaanba qiyaasaha kala duwan.
Inta lagu jiro leukemia marxaladda horumartay, calaamadaha kiliinikada ee cudurka ayaa u muuqda. Xayawaanku wuxuu bilaabmaa inuu ka sii daro, si deg deg ah u daali karo, isugeynta xajmiga feedhka ka sii daraya, tirada caanaha la siiyey waa la dhimay.
Guud ahaan, waxaa jiraya guud ahaan jirka oo ka soo horjeeda asalka khalkhalka habka dheef-shiidka. Lymph nodes, beerka iyo beertu waxay kordheeysaa xajmiga, iyo kuuskuuska muuqaalka maqaarka oo muujinaya jiritaanka buro.
Marka leetemia gaarto marxaladda dhamaadka, geedi socodka neefta ayaa la dedejiyaa. Calaamadaha aan qaaska ahayn ayaa noqda kuwo la dareemo. Marxaladani waxay ku dhammaaneysaa xannibaad dhamaystiran oo ah nidaamka difaaca xayawaanka, taas oo keenaysa dhimasho.
Xayawaanka yaryar, oo ay ugu wacan tahay nidaam difaaca oo xooggan, waxay u nugul yahiin infekshanka dheecaanka degdega ah, taas oo keeneysa dhimasho degdeg ah. Asal ahaan, da'da yar ee dillaacu wuxuu dhacaa, sidaa daraadeed xayawaanku wuxuu u dhiman karaa si kadis ah.
Tijaabadu waa suurtagal keliya kaddib marka daraasado gaar ah la sameeyo. Daweynta cudurka lumida (leukemia) waa wax aan macquul ahayn, kaliya waxaad ka ilaalin kartaa xayawaanka kale ee infekshanka.
Waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo waa in la baaro lo'da 2 sano jirka ah sanad walba si joogta ah fayruska jirkooda. Waa lagama maarmaan in la sameeyo falanqaynta marxaladii hal mar.
Xaaladda gumaadka, kuwaas oo loo isticmaalo bacrinta, cilmi baarista waa in la sameeyaa 2 jeer sanadkii. Ilaa wakhtigaas oo imtixaanku diyaar u yahay, lo'da dibedda laguma dari karo.
Haddii ay jiraan wax ka badan laba xayawaan oo waawayn oo daaqsinka ah, ka dibna waa in laga saaraa daaqsinka waxaana lagu beddelaa madaxyo caafimaad leh.
Wakhtiyada soo socda, ee loogu talagalay taranta dhalidda, waxaad u baahan tahay inaad ka qaadatid lo'da beeraha ugu barwaaqooba oo iyaga u gudba iyagoo leh buluugyada ugu caansan ee leukemia. Ka dib marka xayawaanka jiran laga saaro daaqsinka, qolka oo idil waa in lagu nadiifiyo soodhaha caustic ah ee xalka 2-3%.
Haddii dhammaan baaritaannada ku saabsan 'leukemia' la sameeyo waqtigii loogu talagalay, ma noqon doonto mid aad u adag in la aqoonsado laguna daaweeyo cunnooyinka sida ay u muuqato. Kaliya daryeelka digaaga, ma aha oo kaliya marka la eego quudinta caadiga ah, laakiin sidoo kale marka la eego xaaladda guud. Caanahaagu ha noqdo mid caafimaad qaba!